Ku biir ACP
Kaalmayn u raadso qaansheegta Intarneed-kaaga
Iyadoo kamida dadaal-kayaga socda ee aan ku dhawraynno ku-xiriirsanaan-taada Barnaamijka Xiriirsanaanta Jaban (ACP).
ACP waxay u soo ban dhigysaa kaalmo dhaqaaleed muddo-dheer qoysaska u qalma taas oo dhan ilaa $30/bishii oo dhanka adeegga Intarneedka.
Sida loogu codsado 3 tillaabo:
Hubi u-qalmashada ACP Dhammaystir foomka Hubin Qarameedka.
Codso onlaynka Internet Essentials ama wac 855-8-INTERNET
Dhammaystir foomka ku-biiritaanka ACP-da Xfinity si aad tixgelintaada u hesho. Waxaad tillaabadaan, ugu baahan doonta ID-gii codsiga ee aad ka heshay Hubiye Qarameedka markii lagu ansixiyay. Bilaw ku-biiritaanka ACP.
Bilaw ku-biiritaanka ACP
Waxaad labo jibbaartaa xawligaaga lacag la'aan oo uu weheliyo Internet Essentials Plus
$29.95/bishii + canshuur LACAG-LA'AAN marka aad u qalanto ACP-ga. Dheerayn u hel xawliyada soodejinta - ilaa 100 Mbps. Samee wacitaanno fiidiyowa, galalka la wadaag, muusigga soodejinta iyo qulqulka, iyo dheeri!
Qalab lacag-la'aana, aan lahayn-hubinta tixgelineed, oo aan lahayn qandaraas shardiya.
Hadal si aad u dalbato
Internet Essentials iyo Taleefanka Gacanta Xfinity
Waxaad ku heshaa Internet Essentials iyo hal Taleefan Gacanta oo Xfinity ah oo khadkiisu uusan xad lahayn 5G kaliya $24.95/bil + canshuur iyo khidmado marka aad u qalantt ACP-ga iyo Internet Essentials.
Haddii aad haysato Internet Essentials iyo adeegga Taleefanka Gacanta Xfinity labadaba, Waxtarka ACP baa marka hore loo isticmaalayaa qeybta qaansheegta kaaga soo aaadda. Waxtarka ACP kasta oo haray waxaa loo isticmaali doonaa adeegyada Taleefanka Gacanta Xfinity.
Heshay afgarad koruqaadis? Halkaan ka bilow!
Dugsiyada qaar, samofalladda iyo ururrada kale ee ku salaysan bulshada waxay u kafaala qaadayaan adeegyada Internet Essentials qoysaska aaggaan ku sugan. Haddii aad heshay afgarad koruqaadis, guji hoos si aad dheeri u ogaato, oo aad u codsato Adeegyada Intarneedka la kafaala qaaday oo aan qarash kuugu fadhiyin.
Dardar Geli Soobandhigga
halkuu joogaa si uu u caawiyo
Waxaan xiriirinaynnaa bulshooyinka geesaha dalkaoo dhan, annagoo siinaynna goobo ammaana, si qoysasku u awoodaan inay wax bartaan, shaqeeyaan, oo wax u sahamiyaan iyagoo galaaya Intarneed awli-sarreeya iyo ammaan leh.